सब भन्दा प्रख्यात लोगोहरूले मार्को स्केम्ब्रीको हातबाट आफ्ना उत्पादनहरूका प्रभावहरू भोग्छन् क्रिएटिव अनलाइन
लोगोहरूले कम्पनी, उत्पाद वा सेवाको सबै भन्दा परिभाषित गुणहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि यी सबै उत्पादनहरूले त्रुटिहरू पनि लुकाउँछन्, उनीहरूको अवांछित प्रभावहरू निम्त्याउँछ वा कम्तिमा तिनीहरूको प्रयोगको परिणामको रूपमा जमानत बिगार्छ। तार्किक रूपमा, एक कम्पनी कहिल्यै आफ्नो सेवाहरु को दोष वा कमजोरी बेच्न, तर ... के हुन्छ यदि यो थियो? यो कसरी तपाईंको छवि र तपाईंको लोगोमा प्रतिबिम्बित हुनेछ?
के हुन्छ यदि लोगोहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने उत्पादनहरू प्रयोगको प्रभावहरू प्रतिबिम्बित गर्छन् भने? यो बरु एउटा जिज्ञासु प्रश्न हो जुन डिजाइनरले उठाउँदछ मार्को स्केम्ब्री र एउटा कि प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको १० एकदम मौलिक र हास्य डिजाइनको रूपमा जवाफ दिन्छ। यसले प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रभावहरू मध्ये पित्ती, पखाला, अत्यधिक तौल र अनिद्रा हो। अवश्य पनि, यदि यी केही ब्रान्डहरूको लगोगहरू हुन् भने, बिक्री दर सम्भवतः कम हुनेछ।
र यो कपाल कटाई पछि चिन्ह हुनेछ। ?
हामी मध्ये धेरैलाई थाहा छ कि विशेष गरी पहिलो केही अवसरहरूमा हामी एडुआर्डो कैंचीले हामीलाई काटेको जस्तो हुन्छौ।
कसले भन्यो कि जंक फूड मोटो छैन?
के यो तपाईसँग प्रत्येक पटक न्युटेलाको ठूलो मात्रामा खानु हुने भएको छ?
रेड बुलले तपाईंलाई ऊर्जा दिन्छ, प्रमाण यहाँ छ
र यी दैनिक आधारमा कफी खपतको साइड इफेक्टहरू हुन्
धेरै बाहिर Absolut Vodka तपाईंको दृष्टि बादल, तपाईं बाहिर दस्तक
यो निस्सन्देह सबैको तातो ब्रान्ड हो
यो स्पष्ट भएपछि, जुन सबैभन्दा तातो छ तर अर्को अर्थमा
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » सब भन्दा प्रख्यात लोगो मार्को स्केम्ब्रीको हातबाट उसका उत्पादनहरूका प्रभावहरू ग्रस्त छन्
यदि तपाईंको लोगोले तपाईले के बेच्नुहुन्छ भनेर देखाउँदछ भने म निश्चित छु कि तिनीहरू मध्ये धेरै चाँडै नै परिवर्तन हुनेछ, किनकि तिनीहरूको बिक्री घट्न थाल्नेछ ... हाहाहा, त्यो हेर्नको लागि उत्कृष्ट हुनेछ।
मलाई लेख फ्रान्क मन पर्यो, मलाई लाग्छ कि यो कम्पनीको लागि वास्तवमा के बेच्दछ भन्ने महसुस गर्न यो उत्तम तरिका हो।
अभिवादन र खुशीयामी बिहिबार हो
कार्ला सान्चेज क्विन्टरो भन्यो
फेर्नान्डो बोइक्स भेटियो
कार्ला सान्चेज क्विन्टरोलाई जवाफ दिनुहोस्
फर्नांडो बोइक्स भन्यो
त्यो थियो !
फर्नान्डो बोइक्सलाई जवाफ दिनुहोस्